· Total Members: 134,899
· Newest Member: rlhexle
Arbaco 12,Janaayo 2011 (HSOL)Dowlad goboleedka Hiiraan State ee Soomaaliya oo shaaca ka qaaday Barnaamijkeeda Shaqo.
· admin on January 12 2011 15:12:25 · Read More · 13 Comments · 6254 Reads ·
Dadka iyo duunyada oo u dhimanayo abaaraha ka jira Hiiraan iyo codsigii madaxweynaha Hiiraan oo jawaab laga bixiyey.
Arbaco,12 Janaayo 2011 (HSOL) Dadaalo loogu gargaarayo shacabka ay abaaruhu ku dhufteen oo ka socda dal iyo dibad, kedib codsiyo iyo baaqyo celadhaan ah oo uu u jeediyey qurbo joogta reer Hiiraan Madaxweynaha Hiiraan State.
· admin on January 12 2011 13:09:04
Read More · 10 Comments · 3281 Reads ·
Shabaabka Hiiraan oo caruurta ka qafaalaya Schoolada iyo waalidiinta oo cabsho ka muujiyey arintaas.
Talaado 11,Janaayo 2011 (HSOL) Shabaabka Hiiraan oo caruurta ka raafayo Schoolada iyo cabsi soo wajahday dadka tirada yar ee halkaas ku haray.
· admin on January 11 2011 15:37:53
Read More · 2 Comments · 2063 Reads ·
Talaado 11, Janaayo 2011(HSOL) Shacabka Somaliyeed oo si weyn u mucaaradi jiray amaba ka soo horjeedi jiray maamul goboleedyadii ugu horeyey Somaliya ee dalka ka hirgala ayaa hada xal u arka nidaamkaasi kedib.
· admin on January 11 2011 07:43:41
Read More · 3 Comments · 2225 Reads ·
M/weynaha Hiiraan State iyo wafti uu hogaaminayo oo maanta ka soo dagay dalkaasi Kenya
Isniin 10,Jaanayo 2011 (HSOL)M/weynaha Hiiraan State iyo wafti uu hogaaminayo oo manta ka soo degay caasimada Kenya ee Nairobi iyadoo ay halkaasi ku soo dhaweeyeen qaar ka mid ah golahiisa wasiirada
· admin on January 10 2011 18:19:18
Read More · 2 Comments · 2728 Reads ·
Aqoonyahan Somaliyeed oo dalka iyo dibada laga yaqaano oo isku soo sharaxayo xilka (warbixin horudhac ah xaqiiqdana u dhaw)
Isniin 10, Janaayo 2011(HSOL) Xog rasmi ah oo laga helayo aqoonyahano Somaliyeed oo magac iyo maamuus kuleh bulshada Somaliyeed iyo beesha caalamka ayaa sheegayo in uu isku soo taagi doono xilka madaxweynenimada Somaliya.
· admin on January 10 2011 12:29:16
Read More · 0 Comments · 1965 Reads ·
Safiirka Jaamacadda Carabta ee Soomaaliya oo balanqaaday gargaar
Axad 9,Janaayo 2011 (HSOL)Safiirka Jaamacadda Carabta ee Soomaaliya oo balanqaaday gargaar bani’aadanimo kadib kulan ay wada yeesheen isaga iyo Madaxweynaha Hiiraan State ee Soomaaliya.
· admin on January 09 2011 17:51:41
Read More · 9 Comments · 3144 Reads ·
Qaar ka mid ah beelaha reer Hiiraan oo codsaday in loo magacaabo.
Axad 9, Janaayo 2011 (HSOL) labo ka mid ah beelaha reer Hiiraan oo codsaday in iyaga loo magacaabo xilka gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hiiraan State iyagoo hada bilaabay ololahaas.
· admin on January 09 2011 13:21:49
Read More · 2 Comments · 1955 Reads ·
Dowlad goboleedka Hiiraan State oo loo balan qaaday.
Axad 9, Janaayo 2011 (HSOL) Dowlad goboleddka Hiiraan State ee Somaliya oo loo balan qaaday in laga caawinayo dareyska ciidamada kala duwan iyo Hiiraan State ID Card ay masuuliyiinta maamulka iyo shacabka Hiiraan yeelanayaan.
· admin on January 09 2011 12:49:29
Read More · 3 Comments · 1913 Reads ·
Taageerada loo hayo dowlad goboleedka Hiiraan ee Somali oo walito iska soo daba dhaceyso.
Hiiraan State waxay hore uqaaday talaabo weyn oo horumar leh oo aan marnaba caadi ahayn waana ku amaanayaa wixii hadda kadambeeyana waa in taageero hiil iyo hooba lalagarab istaagaa
· admin on January 09 2011 12:28:20
Read More · 1 Comment · 1809 Reads ·
· admin on January 08 2011 14:23:54
Read More · 0 Comments · 1838 Reads ·
Page 228 of 232: 1...225226227228229230231...232
10,602,173 unique visits